Archdiocese of Mandalay blog: ရဟန္တာများကို သတိရပါ
ရဟန္တာများဟု ကျွန်ုပ်တို့သိမှတ် နားလည်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အမှန်စင်စစ် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ လူသားများပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သာမန်လူတို့နှင့်မတူသည်မှာ အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ၍ သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး မိမိတို့၏ အသက်ကိုပင် စွန့်လွှတ်သွားကြသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းင်းတို့၏ ဘ၀အသက်တာများကိုသေချာစွာ ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ဖြူစင်စွာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြသကဲ့သို့ ခြိုးခြံစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရပေသည်။
ရဟန္တာတို့သည် အပြစ်ကြီး၊ အပြစ်ငယ်များကို မကျူးလွန်မိအောင် ကြိုးစားရှောင်ရှားကြသူများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အပြစ်ပြုမိခဲ့လျှင်လည်း မိမိတို့ စိတ်ထဲတွင် လေးလံစွာခံစားနေကြရပြီး အမြန်ဆုံး အာပတ်ဖြေ၀န်ခံပြီးမှသာလျှင် စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ပြန်လည်ရရှိကြပြီး စိတ်ပေါ့ပါးမှု ရတတ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတရားနှင့် အကြင်နာတရားကို လက်နက်သဖွယ်၊ အဆောင်တစ်ခုသဖွယ် ကျင့်သုံးတတ်ကြပါသည်။
ရဟန္တာသူတော်စင်တို့သည် ခရစ်တော်ချမှတ်တော်မူခဲ့သော လမ်းစဉ်ကို နာခံလျှောက်လှမ်းခဲ့ကြသူများ ဖြစ်သည်။ စိန်ဖိလစ်နေရီဆို မိန့်ခဲ့ဖူးသည်မှာ "မိမိအတ္တကို ဖယ်ရှားပါ။ အများအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပါ"ဟု မိန့်မြွတ်ခဲ့ပါသည်။
ရဟန္တာတို့၏ ထူးခြားသော အပြုအမူတစ်ခုမှာ မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်စွာ နေထိုင်ကြသည်။ ခြိုးခြံခြင်းကို အလေ့အထတစ်ခု ဖြစ်အောင်နေထိုင်ကြသည်။ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှု၊ မကောင်းမှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ကြသည်။ နေ့စဉ် ဆုတောင်းမေတ္တာဆိုခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်းများ ပြုလုပ်နေသော်လည်း အပြစ်ကျူးလွန်နေသူ တစ်ယောက်သည် ရဟန္တာတပါး မဖြစ်နိုင်သေးပေ။ ရဟန္တာတို့သည် ဘုရားတရား ကြည်ညိုရုံသာမက မတရားပြုလုပ်မှုကို ရှောင်ရှားတတ်ကြသည်။
စိန်သြဂတ်စတင်း၏ အဆိုအမိန့် တစ်ခုမှာ "မာနတရားကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မာနတရားကို အခြေခံ၍ မကောင်းမှုများ နောက်မှပါလာတတ်သောကြောင့် ဖြစ်၏" ဟုဆိုခဲ့ပါသည်။ နေမင်း၊ လမင်းတို့၏ အလင်းရောင်သည် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြန့်ကျက်နေသကဲ့သို့ ရဟန္တာတို့၏ မေတ္တာတရားသည်လည်း အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကို မေတ္တာဓါတ်နှင့် အေးမြစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ထွန်းညှိထားသော မီးအိမ်လေးများဟု နှိုင်းဆိုတတ်ကြပေသည်။
ခရစ်တော်နှင့် အမိမယ်တော်ကို အထူးယုံကြည်ကိုးစားသူများ ဖြစ်ကြသောကြောင့် ၀ိညာဉ်ရေးရာ မြင့်မြတ်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ တရားသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုသာ လုပ်ကိုင်တတ်ကြပြီး မိမိ လုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်အပေါ်တွင်လည်း ညဉ်းညူခြင်း မရှိကြပေ။ သူတစ်ပါးအပေါ်တွင် မနာလိုဝန်တိုခြင်းမရှိဘဲ မည်သူ့ကိုမဆို လေးစားစွာ ဆက်ဆံတတ်ကြသည်။ မိမိနှင့် နီးစပ်သူတို့၏ ဆင်းရဲ ဒုက္ခများကိုလည်း အကူအညီပေး၍ မျှဝေခံစားတတ်ကြသည်။ စိတ်ဆင်းရဲနေသူများကို ကူညီပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်အားပေးခြင်းဖြင့် စိတ်သက်သာရာ ရစေပါသည်။
စိန်ကက်သရင်း၏ အဆိုအမိန့် တစ်ခုမှာ "မိမိကို ရန်ရှာသူ၊ မကောင်းကြံသူများကို လက်စားမချေဘဲ သူတို့၏ ကောင်းကျိုးကို မျှော်မှန်းပြီး လုပ်ကိုင်ပေးခြင်း၊ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သပေးခြင်း သာလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်"ဟု ဆိုခဲ့ဖူးပါသည်။ စိန်ထရေဇားကမူ "ကျွန်ုပ်၏ အကြောင်း မကောင်းပြောသူများကို ပိုမို မေတ္တာတရားထားနိုင်ခဲ့သည်" ဟု ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။
ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းပေးခဲ့သော ကမ္ဘာမြေသည် အလွန်လှပခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများကြောင့် အကျည်းတန်ခြင်း မဖြစ်စေလိုပါ။ သဘာဝဘေးဒဏ်များ၊ စစ်ပွဲများကြောင့် ယိုယွင်းပျက်စီးလာနေသော ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြဲလှပစေရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန္တာတို့သည် ငယ်ရွယ်စဉ်မှ စ၍ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ လူငယ်လူရွယ်လေးများသည်လည်း ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်ပြီး အင်အား ပြည့်စုံကြသောကြောင့် ၎င်းင်းတို့၏ လမ်းစဉ်ကို ယခုမှစကာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြလျှင် ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသည် သာယာချမ်းမြေ့ပြီး ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး လှပလာမည်မှာ ဧကန်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပျော်ရွှင်သောအချိန်၌လည်း ရဟန္တာများကို သတိရပါ။ စိတ်ဓာတ်ကျသော အချိန်၌လည်း ရဟန္တာများကို သတိရပါ။ ဆုတောင်းခြင်း၊ ၀တ်ပြုခြင်းများများ ပြုလုပ်ကြပါ။ သင်တို့ကို ရဟန္တာများက စောင့်ရှောက်နေသည်ကို မေ့မထားပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရဟန္တာများက သင်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို အမြဲသတိရနေကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
"Conference matter for Religious"
Rev. Ferreol Giranday. C, SSR.London
(what isaSaint) မှ ဆီလျော်အောင်ပြန်ဆိုထားပါသည်။
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:45 PM